Daawo Col. Gadaafi oo laga duubay filim qoys oo qosol & xiiso (VIDEO+SAWIRO) – SBC
Daawo Col. Gadaafi oo laga duubay filim qoys oo qosol & xiiso (VIDEO+SAWIRO)
Posted by editor on Siteenbar 8, 2011 Comments
Col. Muamar Al-Qadaafi marka magaciisa la maqlo waxaa qofka u soo baxaya hogaamiye awood badnaa oo reer Galbeedka laf dhuun gashay mudo sanooyin ah ku ahaa, nin waxyaabo badan oo halagaa sheego & istus tus badan u sameeyey, nin xukunkiisa aan la loodin karin walow taasi meesha ka baxdey haatan.
Nin dagaal u joog ah oo taageeri jirey jabhadaha Afrika ka dagaalamay ee ka soo horjeeday xukuumadidihii dalalka ay ka soo jeedaan sida ANC (South Afrika), EPDRF (Itoobiya) SSDF (Somalia), IRA (Waqooyiga Ireland), EPLF (Eritrea), Moro Islamic Front (Philippines), PLO (Falastiin) & kuwa kale oo fara badan.
Qadaafi magaciisa marka la maqlo waxaa kale oo kuu sawirmaya 42 sano oo xukunka Liibiya ku dayngaagay, nin aad u macangag ah oo ma naxa ah, nin aad u neceb Yuhuuda, nin aad uga heli jirey qarbudaada & qaska.
Laakiin haatan waxaa soo baxay Filim la yaab iyo qosol leh oo dad badan ay aaminsanaayeen in Col. Qadaafi aanu aheyn nin qoys oo kaliya u taagnaa ibtilo iyo dagaal, taasi oo ku beenowdey filimkaasi waxaa ka muuqda Col. Qadaafi oo nin qoys ah isla markaana ilmo uu dhalay & kuwa uu awoow u yahay cunto afka u galinaya.
Filimka waxaa sidoo kale ka muuqda Col. Qadaafi oo ilmo yar yar oo awoowe uu u yahay isagoo dhar caadi ah oo guri joog qaba isla markaana kursi fadhi ah maa saalooto ku jiifa dushana ay uga boodbaadayaan ilaha oo sida muuqata aan u haysan in yahay Hogaamiyihii wadanka balse og oo kaliya in awoowahood uu yahay.
Muuqaalkan oo ahaa mid qoys oo la duubay sanadkii 2005-tii waxaa laga helay oo laga bililiqaystey mid ka mid ah qasriyada Col. Qadaafi ee magaalada caasimada ah ee Tripoli iyadoo filimka sidoo kale ay ka muuqdaan geel ku xareysay teendho Col. Qadaafi ilmaha iyo qoyskiisa kale uu waqti kula qaadanayo, waxaana sidoo kale ka muuqda filimka isagoo mar mar la fara ka ciyaaraya ilmaha yar yar.
Sidoo kale qasriga Bab Al Aziziya ee Col. Qadaafi waxaa laga helay albunada sawirada oo fara badan, mid ka mid ahaa waxaa gabi ahaantiisa ka buuxay sawirada xoghayihii hore ee arimaha dibada Mareykanka Condoleezza Rice oo ay kulmeen Qadaafi, hada ka hor wuxuu sheegay in uu jecel yahay Mrs Rice maadmaa ay tahay qof midab madow leh oo Afrika ka soo jeeda.
Albumada kale waxaa ka mid ahaa mid ay ka buuxeen sawirada qoyskiisa isagoo waliba qaarkood xiligii laga qaaday ahaa nin da’a yar & kuwa kale oo qoyskiisa ah.
Link Video-ga hoose ka daawo Col. Qadaafi oo filimkan qosolka & yaabka leh laga duubay.HALKAN RIIX